उखु किसानले अनुदान नपाउँदा आन्दोलनका कार्यक्रम घोषणा - Nepali Online News Media-shikharnews.com - shikharnews.com
उखु किसानले अनुदान नपाउँदा आन्दोलनका कार्यक्रम घोषणा
२०७५ साउन २० आइतवार
कपिलवस्तु, २० साउन । कपिलवस्तुका उखु किसानहरुले सरकारले दिने अनुदान अहिलेसम्म पाउन सकेका छैनन् । आ.व. २०७१÷७२ मा सरकारले प्रतिक्वीन्टल २५ रुपैयाँको दरले अनुदान दिने भने पनि अहिलेसम्म नपाउँदा किसानहरु चिन्तित भएका छन् ।
कपिलवस्तुमा ७ हजार उखु कृषकले सो अनुदान पाउन सकेका छैनन् । उखु कृषक ओमप्रकाश चौधरीले अन्य जिल्लाका किसानहरुले अनुदानको रकम पाएपनि कपिलवस्तुका किसानले नपाउनुको कारण सोेधेका छन् । करिव ४ वर्ष भन्दा पहिले दिने भनेको रकम अहिलेसम्म किन पाउन सकिएन ? किसानहरुलाई आशा देखाएर नदिनु गलत भएको भन्दै सरकारले किसानहरुलाई तुरुन्त सो अनुदानको रकम दिन आग्रह गरे ।
कपिलवस्तुमा मात्र करिव ढाई करोड रकम किसानहरुले पाउनुपर्ने रहेको भएपनि सम्पूर्ण पक्रिया पूरा गरेपनि पाउन नसकेको कपिलवस्तु किसान संघका अध्यक्ष अनुपकुमार चौधरीले बताए । पटकपटक सरकारको ध्यानकर्षण गरेपनि अनुदान नपाएको चौधरीको गुनासो छ । सुगर मिलले कागजपत्रमा ढिलाई गरेको लगायतका कारण देखाउँदै सो रकम नदिएको चौधरीले बताए ।
केही गरे पनि अनुदान रकम नदिएपछि कपिलवस्तुको किसान संघको बैठक बसी आन्दोलनका कायर्कक्रमहरु घोषणा गरिएको छ । साउन २० गते आइतवार आन्दोलनकै कार्यक्रमअन्तरर्गत इलाका प्रशासन कार्यालयमार्फत सम्बन्धित मन्त्रालयलाई ज्ञापनपत्र बुझाएको छ ।
साउन २५ गतेसम्म कुनै सुनुवाई नभएमा आन्दोलनको विकल्प नरहेको अध्यक्ष चौधरीले बताए । साउन २७ गते दिउँसो १२ बजेदेखि १ बजेसम्म इलाका प्रशासन कार्यालय चन्द्रौटामा शान्तिपूर्ण धर्ना प्रदर्शन गर्ने, साउन २९ गतेदेखि अनिश्चितकालको लागि कपिलवस्तु किसान संघका अध्यक्ष अनुपकुमार चौधरीसहितको टोली अनशन बस्ने निर्णय भएको कपिलवस्तु किसान संघले जनाएको छ ।
आइतवार ज्ञापनपत्र वुझ्दै इलाका प्रशासन कार्यालय चन्द्रौटाका शाखा अधिकृत जगदीश अर्यालले सम्बन्धित मन्त्रालयलाई सो ज्ञापनपत्र पुर्याउने आश्वासन दिए । अधिकृत अर्यालले आन्दोलनका कार्यक्रमलाई शान्तिपूर्णरुपमा गर्न कपिलवस्तु किसान संघका पदाधिकारीहरुलाई आग्रह पनि गरे ।